EGO waxay u dabaal degaysaa sanad-guuradeedii 77-aad | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraEGO waxay u dabaal degaysaa sanad-guuradeedii 77-aad
24 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, ego, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
ego u dabaal degaa sanad guurada sanadguurada
Agaasinka Guud ee Ankara ee Magaalooyinka Ankara ee “EGO”, “77. Sannad-guurada Sanadlaha ee Aasaaska Kuruluş.
Sannad-guurada sannad-guurada hay'addu waxaa lagu qabtay Hoolka Shirarka ee Dawladda Hoose; Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose Mustafa Kemal Çokakoğlu, Maareeyaha Guud EGO Nihat Alkaş, Gudoomiyaha kormeerka EGO Bülent Alıcı, Maareeyaha Guud ee howlgabnimada EGO Cihan Altınöz iyo Ethem Özbakır, Rugta Ganacsiyada iyo wakiillada ururada aan dowliga ahayn.
77 SANO CALI XAALADA LAGU SAMEEYO
Intii lagu gudajiray wareysiga, wuxuu dhegeystay Bülent Alıcı, Gudoomiyaha Gudiga Kormeerayaasha EGO, Maareeyayaasha guud ee howlgab ah ee EGO ayaa la wadaagay xusuusta ay lahaayeen muddadii ay wateen waxayna safarka ku sii ambaqaadeen wixii la soo dhaafay.
Maareeyaha Guud ee EGO Nihat Alkaş wuxuu sheegay inay mudnaanta koowaad siinayaan qanacsanaanta muwaadiniinta ee caasimada isla markaana ay u adeegsadeen nidaamyada gaadiidka casriga ah iyo tikniyoolajiyada macluumaadka si wax ku ool ah.
Bu Ururkeenna sumcadda leh, oo ku taalay xilligii la aasaasay Jamhuuriyadda isla markaana xididdadiisa taariikhdu ku beegnayd taariikhdaas, waxay adeegyo aad u faa'iido badan siisay Ankara, oo ah Caasimadda Jamhuuriyadda. Ankara ee xitaa noqon brand ah in la wada ogsoon yahay in goobta gaadiidka ee Turkey ah. Waxaan fursad u helnaa inaan aragno adeegga aan u hayno muwaaddiniinta waqti isku mid ah, aragti diidmo ah ama diidmo ah tanna waa wax dadka ku farxiya. Waxaan horumarin doonaa tayada adeegga waxaanan ka dhigi doonnaa gaadiid nabadgelyo badan. ”
“GUUD EE GUUD”
Herdem Music Group iyo Farshaxanada Wadooyinka ayaa sidoo kale xaflad ka qabtay soo dhawayntii ay soo agaasimeen barnaamijka dabaaldega kaas oo Agaasimeyaasha guud ee EGO iyo shaqaalaha hawlgabka ah lagu soo bandhigay muuqaalo guul ah.
Maareeyaha guud ee howlgabnimada EGO Ethem Özbakır ayaa sheegay in 25 sano kadib ay ahayd wax lagu farxo in la xasuusto oo la yiri, hapt Inta lagu guda jiro waqtigeena, waxaan howlo muhiim ah ka qabanay Metro, Ankaray iyo Dabiiciga Dabiiciga. Waxaan u arkaa inay muddadan aad ugu guuleysatey. Mansur Yavaş wuxuu ka gudbi doonaa dhibaatooyinka wuxuuna adeegyo wanaagsan u fidi doonaa dadka reer Ankara. Laga soo bilaabo maalintii ugu horraysay ilaa maanta, EGO waxa gaadhay guuritaan. Waxaan aaminsanahay in Mansur Yavaş uu qaban doono shaqooyin aad u wanaagsan. ”
Maareeyaha Guud ee howl-gabka EGO Cihan Altınöz wuxuu ku muujiyey dareenkiisa ereyadan:
Waa sharaf in la xuso oo lagu casuumo barnaamijkan sannado kadib. Waxaan aragnay ujeedooyin wanaagsan in shaqo culus halkan lagu qaban doono. Markaa waxaan u nimid casuumadda haddii aan wax yar ku soo kordhiney. Guul ayaan u rajeynayaa Degmadeena iyo EGO. Waxaan aaminsanahay in shaqo wanaagsan la qaban doono. ”
Isagoo u dabaaldegaya sannad-guuradii 77aad, Agaasime Guud ee EGO ayaa keenay bas 1987 ah oo loo yaqaan Kombuyuutar oo ku yaal degmada Metropolitan oo martida loo soo bandhigo nostalgia.
Maalinta Caafimaadka Maalinta ee Palandöken
Iiraaniyiin ayaa dabaaldegay Nevruzu Palandökende
Carruurtu waxay u dabaal-dagaan 23 Abri-wakhti iyada oo loo marayo baraf
TCDD 156. u dabaaldegay sanadka oo la socday muwaadin 156 YHT oo ku yaala saldhigga Ankara
SAMULAS tamsi 5. u dabaaldegay sanadka iyada oo la siinayo rakaabka shukulaatada iyo toon
HOOKTA 50 ee Cologne Fair. dabaaldega
TCDD 160. InnoTrans ayaa loogu dabaaldegay 2016
Sannad-guurada 77-aad ee EGO